टि२० मा अफगानिस्तानको २७८ रन,जजाई एक्लैको १६२ ! | Hamro Khelkud
टि२० मा अफगानिस्तानको २७८ रन,जजाई एक्लैको १६२ !
एजेन्सी – ओपनर हज्रतुल्लाह जजाईले कीर्तिमानी विश्फोटक शतक प्रहार गरेपछि आयरल्यान्डसँगको दोस्रो टि२० खेलमा अफगानिस्तानले एकै खेलमा तीन विश्व कीर्तिमानी बनाएको छ ।
शनिवार राती सम्पन्न खेलमा अफ्गानिस्तानले आयरल्यान्डलाई ८४ रनले पराजित गर्दै तीन टि-२० श्रृंखला एक खेल अगावै २-० ले जितेको छ ।
टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको अफगानिस्तानले निर्धारित २० ओभरमा मात्र ३ विकेट गुमाउँदै २ सय ७८ रन बनायो । यो टि२० क्रिकेटमा कुनै पनि टोलीले बनाएको सर्वाधिक उच्च स्कोर हो । यसअघि अस्ट्रेलियाले श्रीलंकाविरुद्ध २६३ रन बनाएको स्कोरनै उच्च रहँदै आएको थियो ।
अफगानिस्तानलाई विशाल कीर्तिमानी योगफल तयार गर्न ओपनर जजाईले कीर्तिमानी शतक बनाए । जजाईले ६२ बलमा १६ छक्का र ११ चौका प्रहार गर्दै १ सय ६२ रनमा अविजित रहे । यो टि-२० क्रिकेटमा ब्यक्तिगत दोस्रो उच्च स्कोर हो । अस्ट्रेलियाका कप्तान आरोन फिन्चले टि २० खेलमा १७२ रन बनाएका छन् । एकै खेलमा १६ छक्का प्रहार गर्ने पहिलो ब्याट्सम्यान पनि बने । कुनै पनि फ्रम्यार्टमा १६ छक्का प्रहार गर्ने जजाई पहिलो ब्याट्सम्यान हुन् ।
त्यस्तै उस्मान घनिले ४८ बलमा ७ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै ७३ रन बनाए । पहिलो विकेटका लागि जजाई र उस्मानले २ सय ३६ रनको साझेदारी गरेका थिए । टि२० क्रिकेटमा सर्वाधिक सर्वाधिक साझेदारी पनि हो । मोहम्मद नाविद १७ रनमा आउट भए । आयरल्यान्डका लागि पिटर चेस,बोयड रंकिन र जोशुआ लिटिलले समान एक एक विकेट लिए ।
२ सय ७९ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको आयरल्यान्डले २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा १९४ रन बनायो । उसका लागि पल स्टर्लिङलले ५० बलमा १२ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै ९१ रनको योगदान दिए । केभीन ओ ब्राएन ३७, शेन गेटकेट २४ रनमा आउट हुँदा स्टुअर्ट पोयन्टर १५ र सिमी सिंह १७ रनमा अविजित रहे । अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रर्दशन गर्न सकेनन् ।
अफगानिस्तानका लागि राशिद खानले ४, मुजिव उर रहमान र फरिद मालिकले समान एक विकेट लिए । तेस्रो टी-२० खेल आइतबार हुने छ ।